Ikhaya eliNcinci kuMlambo iColorado / kufutshane neQuartzsite
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguKristie
Ikhaya lethu linemibono yemilambo kunye nokufikelela emilanjeni. Sikwindawo yokuphumla yaseArizona Oasis. Likhaya elitsha kraca, eliziimitha ezingama-399 zesikwere, elinendawo ephezulu. Uya kuba neembono zomlambo ukusuka kwiveranda, ngelixa usonwabela indawo yomlilo. Jabulela imidlalo yomlambo kunye nentlango. Thatha uhambo oluya eQuartzsite. Indawo enye yokuphuma kumda waseCalifornia.
Hlala kwikhaya lethu elincinci e-Arizona Oasis Resort. Unokuphumla kwiveranda kwaye ubukele umlambo okanye uthathe uhambo olukhawulezayo ukuya emlanjeni. Indlu ibandakanya igumbi lokulala elikhulu kunye neloft. I-Master Bedroom inebhedi elingana neKumkani eneSmart TV. Kukho umnyango wepokotho odibanisa igumbi langasese kwi-Master. Iloft ine-memory foam queen, songa umntu olalayo omnye, kunye neRoku. Igumbi lokuhlala linemibono yomlambo kunye ne-55 "Smart TV enentambo, kunye ne-futon sleeper. Ikhitshi iquka zonke izixhobo ezitsha, kuquka ne-mini dishwasher. Kukho itafile enkulu yokuphakama kwekhawuntara yegumbi lokulungiselela kunye nokuhlalisa i-4. Indlu inemibono yomlambo ukusuka ngaphakathi kwekhaya kunye neveranda.Idekhi yangaphambili inezitulo ezi-6 zokuphumla kunye netafile yomlilo wepropane.Kukwakho i-charcoal grill oyisebenzisayo.Asiboneleli ngamalahle.Zonke i-Arizona Oasis Amenities are Ibandakanyiwe kwindawo yakho yokuhlala efana nephuli, i-spa, (Kwaye zivuliwe!), ukuqaliswa kwesikhephe, iindledlana zentlango, kunye nezinye izinto ezenziwayo. Kukho nomphambili ongaselwandle oneendawo zomlilo kunye nebala lokudlala. Igumbi lokuhlamba impahla elinoomatshini abafumanekayo ngentlawulo nje. umgama omfutshane. *** Ukuba eli khaya libhukishiwe kwaye usenethemba lokuthatha uhambo oluya kuMlambo iColorado, jonga elinye ikhaya lethu eBlythe. Yindlela enye yokuphuma:-)
Ipropathi yaseArizona Oasis Resort. River Run Grill phantsi kwesitrato. Indawo enye yokuphuma kumda waseCalifornia. Ukuloba, imidlalo yamanzi, imidlalo ye-ATV, ukuzingela, ukukhwela intaba .... ininzi yokwenza!
Siya kufumaneka ngeselfowuni okanye umnxeba.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ehrenberg